Maxaa Maxkamad Loo Keeni La,a Yahay Ugaas Maxamud Duulane? – Rasaasa News
Maxaa Maxkamad Loo Keeni La,a Yahay Ugaas Maxamud Duulane?
May 5, 2012 Maxaa Maxkamad Loo Keeni la a Yahay Ugaas Maxamud Duulane
San Deigo, May 5, 2012 [ras] – Madaxwaynaha Deegaanka Somalida Ethiopia Abdi Maxamud Cumar wuxuu fagaare ka sheegay in Ugaas Maxamuud Duulane u xidhan yahay dad ay wax isku haystaan.
Waraysigii uu Madaxwaynaha Deegaanka Somalida Ethiopia siiyay BBC laba bilood ka hor ayuu ku xaqiijiyay in Ugaasku u xidhan yahay hanti uu dad ka dhacay. Hadaba, waxaa is waydiin leh, waa maxay sababta Ugaaska maxkamad ku cadaysa dambiga loo keeni la yahay.
Waxaa jirta in Ugaas Maxamud Duulane uu wali ku jiro xabsiga dhexe ee deegaanka Somalida Ethiopia oo aan wax maxkamad ah la soo taagin lagu cadaynin wax danbi ah. Aduunka sharci ayaa ka jira, marka ruux la xidho waa in maxkamad la keenaa si dambiga loohaysto loogu xukumo.
Hadaba, maxaa ka jira eeda ah in Ugaasku dhacay hanti loona haysto, sida Madaxweynuhu sheegay bilo ka hor, haday jirto waxay ahayd in maxkamad la geeyo Ugaaska, laakiin sida dhabta ah Ugaasku wuxuu u xidhan yahay Madaxweynaha deegaanka Somalida Ethiopia.
Midaasna, waa mid sharciga aduunka, kan federaalka, iyo kan degaanka Ethiopia ka hor imanaya. Waxaa fiiro gaar ah u baahan in muwaadin u dhashay deegaanka Somalida Ethiopia oo aan nabad waxba u dhimin, siyaasadna galin shakhsi xukuumada ah oo ay isku xuquuq yihiin u xidhnaado wakhti dheer. Waa arin aan sinaba loo aqbali Karin!
Waxaa kale oo ka buuxa jeelka dhexe ee deegaanka Somalida Ethiopia dad fara badan oo la xukumay iyaga oo aan wax maxkamad ah la taagin.
Degaanka waxaa ka curtay is badal dhinaca nabad galiyada iyo horumarinta ah, dadweynaha degaankuna taageeray.
Dawlada Federaalka iyo maamulka degaanka, waxaa laga codsanayaa in ay wax ka badalaan qaabka dadka lagu soo xidho, qaabka ay maxkamadahu u shaqeeyaan iyo xabsiyadaba. Sharcigu ma ogola in dal ay nabadi ka jirto muwaadiniintii dalka u dhalatay bilaash lagu xidho.
Hadii shakhsi la soo xidho, waa in la keenaa maxkamad oo aan la iskaga haynin jeelka oo waliba la baadhaa danbiga ruuxa lagu soo oogay. Xukuumada Deegaanka Somalida waa in ay ku shaqaysaa sharciga u yaala aduunka, federaalka iyo kan degaanka Ethiopia.
Degaanka Somalida Ethiopia waxaa ka jira dulmi badan oo aan siyaasad raad ku lahayn iyo nabad galiyo midna, cida wadana sharciga ayaa ka sareeya.
Ugaas Maxamuud Duulane arintiisu waxay hortaal ururada xuquuqda Ethiopiana shaqo kuma leh, laakiin shakhsiga uu u xidhan yahay Ethiopia wax waa laga waydiin.
Jaaliyada Somalida Ethiopia
Qaybtii Shanaad Sheekadii Xasan Mataan Axmed Xirsi